I-China Vacuum Pre Lamination Amawindi omoya emoto Vacuum indandatho yomlilo abakhiqizi nabaphakeli | Fuzuan
Vacuum Pre Lamination Car windshields Vacuum ring ring
Ukusetshenziswa: Umshini wokukhipha umoya wezimoto
Ingilazi Iyadingeka: Amawindi omoya angaphambili engilazi elayiniwe emotweni
Inombolo yemodeli: FZVPL-2000
Ububanzi obusebenzayo: 2000mm
Usayizi Wengilazi Omkhulu: 2000*1300 mm Ubuncane Bengilazi Usayizi: 1000*500 mm
Ubukhulu bengilazi: 3.2mm - 6 mm
Umthamo: 16s/pc (Eyenziwe ngokwezifiso)
Ukujula Kokugoba: UMax. 250mm
Isikhathi Sokuhlanza Esibandayo: 22 min
Isikhathi Se-Vacuum Esishisayo: 14 min
Iziqu zeVacuum:＞-0.092 Mpa
I-Glass Quantity Conveyor Ingathwala:200 pcs (Eyenziwe ngezifiso)
Ingcindezi yokuqala iwukukhipha umoya phakathi kwengilazi nefilimu emaphakathi bese uvala indawo ezungezile. Ukuze kuqedwe ngokuphelele ama-bubbles ku-laminate futhi kuhlanganiswe ngokuqinile nokucindezela okuphezulu, kuyadingeka ukusebenzisa ingcindezi enkulu neyunifomu kanye nokushisa okufanelekile ukukhipha ngokuphelele igesi futhi wenze ingilazi nefilimu ye-PVB ihlanganiswe ngokuphelele futhi ibonakale.
Okokugcina, isampula liyadingeka ukuhlola amandla engilazi, futhi ibhola lensimbi elingu-2.2Kg liyehliswa lisuka kubude obungu-4m.
Uma ibhola lensimbi lingakwazi ukungena engilazini, ingilazi ihlangabezana nezidingo.
Enqubweni yokukhiqiza ingilazi ye-windshield ene-laminated, ngemva kokugoba okushisayo kwe-windshield kanye nenqubo ye-laminated ye-PVB, umoya uvaleleke phakathi kwezingcezu ezimbili zengilazi. Kuyadingeka ukukhipha umoya ngaphansi kwezinga lokushisa elithile kuze kube yilapho wonke ama-bubbles omoya esuswa, futhi okwamanje, imiphetho ye-windshield ivalwe ngokuncibilika nokuhlanganiswa kwe-PVB. Lesi isithando somlilo se-Vacuum pre-laminate, isithando somlilo sendandatho yevacuum, samukela ukushisa kwangaphambili kanye nokucindezela kwangaphambili, ukuqedela inqubo yokukhipha umoya.
Kuphinde kubizwe ngokuthi isithando sokushisa sangaphambili nesicindezela ngaphambili, ngoba ingilazi yemoto yokushisisa ngokufanayo ihlanganisa isilawuli esiyinhloko kanye nedivayisi yokushisisa ngaphambili kanye nedivayisi yokufaka yokubonisa exhunywe ngogesi kusilawuli esikhulu. Idivayisi yokushisisa ngaphambilini ihlanganisa ibhande lokudlulisa. Isiqondiso sinikezwa ngendawo ephezulu yeshidi, isiteshi sokushisa, isiteshi sokupholisa kanye nendawo ephansi yeshidi ngokulandelana. Ngokubeka ishubhu lokushisisa endaweni ye-interlayer yodonga lwesiteshi, ishubhu yokushisisa igcinwa kude nengilazi yemoto. I-air blower yakha indlela yomoya ojikelezayo, ukuze umoya oshisayo uthunyelwe ngokulinganayo esiteshini sokushisa, okuthuthukisa kakhulu izimo zokushisa zeglasi yemoto, ngaleyo ndlela ithuthukise ngokuphumelelayo ikhwalithi yomkhiqizo. Ngaphezu kwalokho, ngokungeza isiteshi sokupholisa, ifilimu ikhishwa ngemva kokupholisa umoya. Lapho izinga lokushisa lengilazi yemoto lehla kakhulu, ayikho ingozi yokusha lapho kuthintwa ngezandla ezingenalutho, okuthuthukisa kakhulu izimo zokusebenza.
Lolu hlelo Lokukhipha umoya olunganqamula indandatho yevacuum ngokuzenzakalelayo ekuxhumekeni kwe-vacuum yesidluliseli.
● Ivalvu yevacuum ezenzakalelayo iyavaleka
● Ukukhishwa kwe-silicon hose okuzenzakalelayo
● Ukukhipha indandatho ye-vacuum ye-silicon ezenzakalelayo
● Ukubuyisela indandatho ye-silicon ezenzakalelayo
Inqubo ye-automotive glass de-airing ye-laminated Windshield kanye ne-sunroof.
Inqubo ye-autoclave vacuum pre-laminate ngaphambi kwenqubo ye-autoclave yokushisisa kwangaphambili, inqubo yokucindezela ngaphambili kwe-vacuum.
Umthamo we-FZVPL-2000: 16-25s/pc (Okwenziwe ngokwezifiso)
Uma i-W/S ibekwe ku-conveyor futhi nolayini womshini wokuvala uxhumekile, ivacuum iyadonswa ukuze kukhishwe umoya phakathi kwamafasitelana engilazi ngaphambi kokuba i-WS ishise.
Ingxenye enkulu yomshini we-Automotive Glass Windscreen Vacuum Pre- Laminate ihlanganisa
● Isistimu yokulayisha i-windshield egobile
● Isigaba Sokukhipha umoya Okubandayo,
● I-Hot De-airing Section, Umhubhe wokomisa ukuzungeza komoya oshisayo wakhiwe ngepayipi lokufudumeza, ifeni, igumbi, ipayipi lomoya elinikezelayo kanye nesistimu yokulawula izinga lokushisa okuzenzakalelayo.
● Isigaba Sokupholisa, Ngemva kokupholisa, izinga lokushisa elingaphezulu lengilazi alikho ngaphezu kuka-55 ° C.
● I-Automatic Valve, Ibhulokhi yasentwasahlobo iphusha isibambo se-valve yebhola endaweni ebucayi ukuze usike isistimu ye-vacuum nokuxhuma indandatho yengilazi.
● Isistimu yokukhipha ipayipi,
● Isigaba Sokulayishwa, isistimu ye-Conveyor enezisekelo zengilazi eziqondile.
● Isistimu yeVacuum, yakhiwe ngephampu yevacuum, ithangi lokugcina umoya, i-alamu yokucindezela ibanga elide nokunye.
● Isistimu yokulawula,
● Ukuhlolwa Kwezivikelo Zomoya Ngemva Kokukhipha umoya (NGOKUZITHANDELA), kusetshenziswa ukulungiswa kwekhamera ye-Canada DALSA yokuskena umugqa ongu-8K (amaphikiseli angu-8192),Igeji ye-digital negative pressure gauge kanye nedivayisi ye-alamu ezwakalayo nebonwayo kufakwa egunjini lokubeka impahla. Uma ukuvuza kwenzeka kusistimu ye-vacuum (ingcindezi ye-vacuum ingaphansi kuka -0.08Mpa), i-alamu iyakhishwa ukuze ikhumbuze opharetha ukuthi ayiphathe.
● Ipharamitha yezobuchwepheshe ingahlelwa, igcinwe futhi ilayishwe esikrinini sokuthinta. Ngemuva kokuthi ukulungiselelwa kwepharamitha kuqediwe, ingilazi yokudlulisa, ukufudumeza, ukuhlanza, ukupholisa, kanye nezinqubo zokuphuma ziqedwa ngokuzenzakalelayo.
● Indlela yokushayela amandla ezimele, ukuguqulwa kwesivinini esilungisekayo.
● Izisekelo zengilazi ezime mpo zishiselwe ngamashubhu angunxande ensimbi engagqwali, imicu yokusekela ephambana namapayipi ifakwe i-silica gel groove engu-3 ukuze ithwale ibhulokhi yengilazi (ukuvimbela unqenqema lwengilazi ukuthi luqhume), futhi inkatho ye-silicone ethola ibhulokhi yengilazi igxiliswa Ibhodi L ngezikulufo, livimbela ukushelela. isiphetho sezisekelo ezimbozwe ngezitobhi zenjoloba ze-EPDM, futhi zinamathiselwe kahle ngokuncanyelwayo kunamathiselwe ekugcineni kwezisekelo.
● Indlu yesilika eyenziwe ngezinto ezikwazi ukusekela izinga lokushisa eliphezulu (100°C)
● Irabha imisa izinto kusuka kupulasitiki kuya ku-EPDM.
Ukujiya Kwengilazi 3.2 mm - 6 mm
Ukujula Kwe-Bend Ubukhulu 250mm
Amandla 16-25s/pc (Kwenziwe ngokwezifiso)
Amandla Aphelele 220 KW
Ubukhulu 14970L*3400W*3100 mm (Kwenziwe ngokwezifiso)
Umoya ocindezelwe 0.6-0.7 Mpa
● Idizayini iyadayiswa. Uma unezidingo zevolumu ephansi, ungafaka umhubhe omfushane. Lokhu kuzosindisa isikhala, nezinye izindleko uma ziqhathaniswa nolayini wosayizi ogcwele.
● Ivumelana nezimo kakhulu maqondana nalokho ongakukhiqiza. Kufanele ukwazi ukusebenzisa le migqa enezimo ezilula. Uzokwazi ukucisha umoya ama-WS, ama-SL, ama-SR anezixhumi noma ezingenazo, ngokugoba okujulile noma ngaphandle kwawo kuhhavini wendandatho yevacuum.
● Idizayini ekhethekile yesistimu yokushisisa nokupholisa, ukunciphisa ukukhiqizwa kwamabhamuza engilazi ngempumelelo.
● I-Conveyor ene-frequency inverter.
● Izinzwa ezifanele zizofakwa ukuze kutholwe ubukhona bengilazi.
● Ukulawula izinga lokushisa okuzenzakalelayo.
● Umzimba oyinhloko wokushisisa ufakwe phezulu, izindela ukuze kuhlakazwe futhi kulungiswe ngokushesha.
● Ukuhlukaniswa kwegumbi lokushisisa, igumbi lokupholisa kanye negumbi lokushintsha elinekhethini leseyili elimelana nokushisa.
● Ukupholisa Isistimu Yomoya Ejikelezayo
IMISHINI YOLAWULO OKUPHATHELENE
I-Automotive Windshield glass Processing Machinery
● Umshini Wokulayisha Wengilazi Ozenzakalelayo
● Imishini yokusika ingilazi, yokuhlephula, yokugaya
● Umshini Wokuwasha Nowomisa Ingilazi Eyisicaba
● I-Glass Silk Screen Printer, Isistimu Yokomisa Nokupholisa
● I-Talcum Powder Spraying Machine
● Isithando Somlilo Esigoba Ingilazi
● Umshini Wokuwasha Nokuwomisa Wengilazi Egobile
● I-PVB Assembly Line Automotive (Ifilimu ye-PVB ifakwe phakathi kwamashidi engilazi angu-2)
● Vacuum Pre-Laminate Machine (Ukukhipha umoya kwengilazi ehlanganisiwe)
● Ubakaki Wenkinobho Yesibuko Esingemuva
● I-Glass Inspection Line
● Ukupakisha ingilazi
Okwedlule: Imishini ye-lamination ye-PVB ezenzakalelayo yemishini yokugcwalisa i-windshields
Olandelayo: I-De-airing system kokubili yama-windshields nama-sidelites
Isistimu yokubuyisela indandatho yerabha ezenzakalelayo
Ukukhipha ipayipi le-vacuum ngokuzenzakalelayo